I-Rustic, indlu ethokomele futhi ebekwe kahle.
Heliópolis, Pernambuco, i-Brazil
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Clodoaldo
Indlu ebukekayo, enomoya futhi ebanzi, ezungezwe imvelo, endaweni engcono kakhulu yamaholide edolobheni laseGaranhuns. Indlu ine-balcony, ingadi, igumbi lokudlela, igumbi lokuhlala elikhulu eline-TV nezindawo zokufunda, indawo yokosa inyama ehlanganiswe nevulandi yangaphakathi, igumbi lokuwasha eli-1 nekhishi eligcwele. Ihlalisa abantu abangafika kwabayi-10 emibhedeni emagumbini ama-4, nezindlu zangasese ezi-2 kanye nezindlu zokugezela eziphelele ezi-2. Ilungele ukuhlanganisa izizukulwane ezihlukene zomndeni wakho esimweni sezulu esimnandi sase-Garanhuns.
Le ndlu yakhiwe ngemuva kwendlu enkulu yomndeni wakithi, kodwa inomnyango ozimele ovela eceleni. Yindlu eyenzelwe ukuzijabulisa nokuphumula, enosofa, ohhamoko, amatafula nezihlalo ezindaweni ezahlukene. Sinemidlalo yebhodi, omagazini kanye nezincwadi, kuhlanganisa nezezingane. Isakhiwo kanye ne-ambience yezinto eziyigugu zendlu nezinto ezivela enyakatho-mpumalanga: phansi kunokusha kukasimende oshisiwe, obuye usetshenziswe ezintweni zokubala, ama-hammocks alukwa eTacaratu, idolobha eliseduze, ubuciko bobuciko baseGaranhuns, kuhlanganise master Fida Phathi Verissimo. Ifenisha iyimpahla yefa ethintekayo noma eyenziwe ngesandla eyenziwe ngababazi abavela e-Olinda nase-Garanhuns, amanzi okuphuza amahle anikezwa yi-Garanhuns (izwe lamanzi amaminerali e-Serra Branca) avuselelwa ngesihlungi sobumba. Indlu igcwele izitsha zasekhishini esizihlanganyela nezivakashi: izitsha, izibuko nezitsha, imimese yasekhishini nezinhlobo ezahlukene zamapani (ubumba, i-ceramic, insimbi engagqwali nensimbi). Ekhishini elingaphandle, sinegrill yegesi nazo zonke izinto zokosa inyama ezitholakalayo, kanye nesitofu se-semi-industrial namabhodwe amakhulu ama-feijoadas, isitshulu nokunye ukudla okudumile. Izindlu zokugezela ezimbili kanye nokugeza okuhhafu okubili kunikeza izinto eziyisisekelo ngokulula nokunethezeka, nakuba zincane. Futhi sinezitsha zokugezela ezingu-2 ezisebenza njengamatafula okugqoka anokukhanya kwe-LED (efanele izimonyo) kanye nesokhethi yokomisa izinwele, ukunakekelwa okunelungelo lokuyize. Ezindongeni sinikezela indawo ethile ezinkondlweni nezobuciko, into, ngokubona kwethu, ibalulekile ekuphileni nasekuhlalisaneni. Konke kwenziwa ngothando ukukhoselisa umndeni wethu futhi manje sesihlanganyela nowakho.
4.96 ·54 okushiwo abanye
4.96 · 54 okushiwo abanye
I-Heliópolis iyindawo eyingqayizivele mayelana nezokungcebeleka nezohwebo. Indawo ethule ukuze ujabulele ukuhamba, izindlu ezinhle, izikwele namapaki. Parque Euclides Dourado isikhala nsuku zonke zokuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili, nge inkundla yokudlala kanye epaki isikeyiti, ekwamukeleni zonke izizukulwane, has a umtapo ezinhle endaweni APC, Ngaphezu kokunikela iphunga okumnandi zikagamthilini ekuseni nokuwa. Pm . Isikhala sokuhlalisana kwezakhamuzi zasendaweni kanye nemisebenzi eminingi ngesikhathi samaphathi nemikhosi e-Garanhuns. Ngaphezu kwalokho, unezitolo ezingcono kakhulu ezitholakalayo, izitolo zokuhlobisa kanye nezingubo zokugqoka endaweni. Futhi inesitolo esihle kakhulu sika-ayisikhilimu, isitolo sezincwadi esihle nezitolo ezintathu zikashokholethi, ngaphezu kokuba amamitha ayi-100 ukusuka e-El Dourado Cinema, esemgwaqweni ogcwele ama-tapiocaries, amabha kanye nezindawo zokudlela. Ukuzola, ukuphumula nokunethezeka kweholide lakho. Ukuhlala izinsuku ezimbalwa e-Heliópolis kuyinto engasoze yalibaleka yokuhlalisana kwabantu basemadolobheni emindenini, ikakhulukazi izingane, intsha kanye nabantu abasha, abahlala emadolobheni amakhulu, ahlukaniswe izindonga, ukugcwala kwezimoto eziningi futhi ngaphandle kokuba nokwenzeka kokuhamba ngokukhululeka endaweni ekhululekile ukuthi Ukuziphilisa edorobheni elincani kusitjhijilo kuphela yona.
Olá, somos Clodoaldo & Silvia, os anfitriões da Casa do Quintal. Um natural de Garanhuns e uma cearense, amantes do nordeste, de música, literatura, história e artes, em especial arte culinária e artesanato de raiz. Cultivamos a arte de jogar conversa fora e a arte da convivência.
Olá, somos Clodoaldo & Silvia, os anfitriões da Casa do Quintal. Um natural de Garanhuns e uma cearense, amantes do nordeste, de música, literatura, história e artes, em especial a…
Samukela izivakashi zethu lapho zingena, kungaba ngokomuntu siqu noma ngommeleli, lapho sibheka ukuthi izivakashi zingobani, sethula Indlu futhi sikhuluma ngomndeni osingatha wendlu enkulu. Sethula izindlu kanye nabaqondisi bokuvakasha, futhi sikwazisa ngezindawo eziseduze futhi sikunikeze ulwazi kanye noxhumana nabo ngezinkonzo ezingase zicelwe. Sisebenza amahora angama-24 ngosuku kukho konke ukuhlala kwakho.
Samukela izivakashi zethu lapho zingena, kungaba ngokomuntu siqu noma ngommeleli, lapho sibheka ukuthi izivakashi zingobani, sethula Indlu futhi sikhuluma ngomndeni osingatha wendl…
UClodoaldo Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Heliópolis namaphethelo